Egwuregwu swiiti anwụrụ - Free Ndụ Ndụ Atụmatụ Ndị na-egosi - Swiiti anwụrụ Saga Free Downloads Enyemaka Ndị aghụghọ
Ị nọ ebe a: Ulo / Ulo
Kedu otu ị ga-esi tụọ ihe ịga nke ọma n'ụwa taa? Ọ dị mma, ọ bụ ihe dị mfe mmadụ na-eme nke ọma ma ọ bụrụ na ọ mezue ọrụ dị mgbagwoju anya na-enweghị nchegbu. Ga-eche ọtụtụ ọnọdụ nwere ihe mgbagwoju anya ihu. You ga-enyefe? Ọ bụrụ na i mee, mgbe ahụ ị nweghị ike ịnụ ụtọ ụtọ nke ihe ịga nke ọma. Nke a bụ ebe egwuregwu nke […]
Nri swiiti anwụrụ siri ike bụ nri anaghị atọ mmadụ niile ụtọ. Mana maka ndị na - eme ya, anyị ji n'aka na ọtụtụ ọkwa dị ebe ha nwere ike inwe obi ụtọ a. Agbanyeghi na enwere ihu igwe siri ike ma nwekwaa nsogbu gbara ghari ndi ahu dika ndi n’amaghi ama na iti mkpu, machibido Smartphone na ịlele ya mechara […]
Ever nwetụla mgbe ị na-eche ka oke osimiri dị omimi? Ego anyị buru ibu bụ nnukwu ụyọkọ kpakpando anyị? Olee otú mbara igwe dị? Kedu ọkwa nke swiiti anwụrụ Saga ga-adị? Echere m, Ọ dịghị ka anyị agafeela ha niile; n'ezie, Ọtụtụ n'ime anyị na-ada ezigbo azụ n'isi nke ugbu a. Na mgbakwunye akụkụ, […]
Candy Crush fever agaghị agbada oge ọ bụla, ka ndị mmadụ na-eru n'ọkwa dị elu, ịnụ ọkụ n'obi ha na-arị elu. Ọ bụ loop dị egwu ma n'ụzọ na-atọ ụtọ. Ihe isi ike siri ike bụ akụkụ nke egwuregwu ahụ, otu a ka anyị chepụtara iji nye gị Candy Crush Level 1442 Ndị aghụghọ na Atụmatụ! Otu […]
Anyị na-ekwukarị gbasara obi ụtọ mana ị na-eche ihe ọ pụtara ? Ọ nwere ike ịpụta na ihichapụ ihe mgbochi ị rapaara ya. N'ihe banyere swiit anwụrụ, ndị ọrụ ’obi ụtọ nwere ike ịbụ ikpocha ọkwa na-enye ha nsogbu. Ọtụtụ ndị egwuregwu na-eme mkpesa, mgbe ha na-arapara na a […]
Ọ na-ewute gị maka ịrapara n'otu ebe ahụ ị nọ? Ọ dị gị ka ndụ gị enweghị ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụrụ na enwetaghị ihe mgbaru ọsọ a? Eeh, ọtụtụ ndị mmadụ na ndụ nwere otu mmetụta ma ọ bụrụ na ha arapara n’otu ọkwa n’egwuregwu. N'ihi, ịchọta obi ụtọ na-enweghị ikpochapụ a […]
Odu mme owo ke ererimbot emi esimade mme mfina. Ha na-eche na ihe kachasị mma n'ime ha na ụwa ịma aka. Ha aghaputara uzo ha gesi dozie uzo di mgbagwoju anya. Otú ọ dị, oge ụfọdụ ndị ọrụ na-arapara. N'ezie, nke a bụ oge mgbe ị chọrọ a obere guideline si n'ebe ọ bụla nke […]
Ọ dị mgbe ọ na-adị gị ka ndụ gị dị obere? Ọ dị mkpa itinye agba na ndụ gị? Ọfọn ọ bụrụ na ị na-eche ya mere na nke mbụ ị nwere ike igwubeghị swiiti anwụrụ ma. Nke a bụ egwuregwu nke candies. Offọdụ n'ime ha bụ nkeawa akara, ụfọdụ ọbọp na ụfọdụ bụ naanị […]
N'ụwa taa dị egwu, anyị kwesịrị ịchọta oge naanị anyị, oge na-eme ka ndụ dị ndụ, oge nke n’enyere anyị aka ịmịcha nke ọma n’ime nzuzu a anyị kpọrọ ndụ. Ọzọkwa, anyị ga-abịa na kacha ụzọ mgbapụ n'ihi na ị si swiiti anwụrụ Jelii saga. Banyere njem Candy Crush […]
Ka nwere ike ikwenye na ụfọdụ ndị na-eme atụmatụ egwuregwu vidiyo naanị? M dị ka nke a bụ n'ezie? Younu na-ebi na narị afọ nke 19 ma ọ bụ gịnị? Kedu ihe kpatara na anyị ekwesịghị ijikọ ndị enyi anyị mgbe ejikọtara ihe niile n'ụwa taa? Ànyị nwere oge ịnọnyere ha oge niile? Ọ bụchaghị, […]
Emelitere ikpeazụ na Julaị 16, 2021 Site na Isobella Franks Hapụ ikwu
Emelitere ikpeazụ na Ọgọst 10, 2021 Site na Isobella Franks Hapụ ikwu
Emelitere ikpeazụ na Ọgọst 4, 2021 Site na Isobella Franks Hapụ ikwu
Emelitere ikpeazụ na Nọvemba 11, 2021 Site na Isobella Franks Hapụ ikwu
Peeji na-esote »
Nzuzo & Iwu kuki